Orlọ frontlọ Ahịhịa Mere Ihe Akụkọ, 1708, Homelọ nke Mbụ na Osimiri Saddle
Orlọ Mmiri Mmiri Mere Eme - Mmiri 1708
Home » Ndepụta » Orlọ Mmiri Mmiri Mere Eme - Mmiri 1708
Sq Na: 5180
Frontlọ Ahịa Mmiri Mere Ochie, Ozo Onwe
Ngwongwo uzo mmiri ndi mmiri nke caliber na-adighi adi idi. Nke a bụ otu oge n’ime ndụ gị iji tinye ndụ gị n’ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme nke ihe ndekọ mmiri ae debere nke ọma. Biri na ezi ụlọ a na acres 2.3 nwere nsụ mmiri, iyi, ọdọ mmiri, ogige tenis, ọdọ mmiri, na ogige!
Vanlọ Thomas Van Buskirk, dị ka edepụtara na Ụlọ Akwụkwọ Congress, bụ ụlọ izizi e wuru na Saddle River, NJ na ikekwe ụlọ izizi nke steeti ahụ.
Akụkọ ndị metụtara ụlọ a dị n'akụkụ mmiri na-ama jijiji. Enweghi ike imeghari ulo na ihe onwunwe na Saddle River taa.
Nke a rụrụ na 1708, mgbidi ụlọ ahụ na-ekwu okwu mpịakọta. Ọgbọ itoolu nke Buskirk biri, ma na-arụ ọrụ ala ahụ ruo na 1920s; Ndị agha nnupụisi bi n'ụlọ ahụ ma na-abata n'ime ala ahu; ndị agbata obi na-agbakọ maka emume ụka ma na-enwe nzukọ ụlọ nzukọ obodo na oche ụlọ. N'otu oge, a na-eji ụlọ dịka nlọ oriri na ọ Taụ andụ; na, afọ ole na ole gasịrị ka emechara egwuregwu na Polo Fields.
Jupụta na oge a na-apụghị ịgbagha agbagha dị ka ndagwurugwu achara, aka mbara ala, na ịkpụ pọtọpọtọ, ndozigharị ọ bụla ejirila nwayọọ nwayọọ chepụta oge a ka nwee ike ọgbara ọhụrụ.
Ndozi kichin / solarium nwere mgbidi nke iko iji mepụta ebe obibi / ime ụlọ jupụtara na anyanwụ. Enwere nkwekọrịta nke ụlọ nnabata nke mbụ na nnukwu ụlọ / nnukwu ụlọ nwere 13 ceiling katidral ụlọ.
Site na azụ ụlọ, enwere ọmarịcha echiche nke ọdọ mmiri na ịga na anụ ọhịa. Gee ntinye mmiri si na ebe ndị a na-agba mbara ma ọ bụ ihe nkwụ na-agafe na-asọpụta.
Ogige ahụ dị ọkụ na-anabata ụgbọala abụọ, ọdụ ụlọ / inyinya abụọ, yana nnukwu ụlọ nke abụọ nwere nnukwu ụlọ maka iji rụọ ọrụ dị ka ọfịs, mgbatị, ụlọ ihe nkiri ma ọ bụ ụlọ egwuregwu. Enwere ike ịgbatị ya maka onye na-anakọta ụgbọ ala.
Lifestylezọ ndụ enweghị atụ. Ranlọ akwụkwọ akara. Estụ Stụ Isi Saddle River.
Kwe ka SpecialFinds tinye gị n'ihu ndị na - ege ntị zuru ụwa ọnụ nke ndị na - azụ Homelọ Pụrụ Iche
Ahịa: $ 1,995,000
Okwu: 164 E Saddle Osimiri Rd
City: Osimiri Saddle
Koodu mpaghara: 07458
Afọ Wuru: 1708
Ụkwụ Square: 5180
Nke gara agaNnukwu Acreage RanchIhe na-esoteLọ Massapequa Park, Ugboro Abụọ!
Nnukwu Acreage Ranch
Lọ Massapequa Park, Ugboro Abụọ!